36 Macalimiin ah oo loo tababaray inay bilaawaan oo ay fududeeyaan naadiyada gabdhaha iyo wiilasha ee Iskuulada
Kor uqaadida sahalka iyo fahanka dhaqanka soo jireenka ah ee Soomaaliyeed ayaa waxa uu kamid yahay Ujeeddooyinka uu leeyahay ‘Mashruuca Soo Nooleynta Dhaqanka iyo Dhisidda Nabadda’. Aas-aasidda iyo xoojinta naadiyada sugaanta ee iskuulada ayaa waxa uu kamid yahay hababka wax loogu baraayo dhalinyarada Soomaaliyeed dhaqankooda.
Bishii Janaayo gudaheeda ee sannadkan, Hey’adda CISP oo ay wehliso hey’adda maxaliga ah ee (SPL) ayaa waxa ay tababar lagu baranayey dhaqanka Soomaaliyeed u qabteen macalimiin ka kala yimid iskuulo wada shaqeyn ay ka dhexeyso hey’adda oo Muqdisho ku yaallo. Sagaal iyo tobban rag iyo toddobo iyo tobban haween oo macalimiin ah ayaa waxa ay ka qeyb-qaateen fadhiyo kala duwan afartii maalin ee uu socday tababarka.
Ujeeddada tababarkani ayaa ahaa in la helo macalimiin fududeysa aas-aasidda naadiyada wiilasha ardayda iyo gabdhaha ardayda ah ee iskuuladooda. Aas-aasidda naadiyadaani ayaa hadafka laga leeyahay waxa uu yahay inuu isku furo qeybaha waxbarashada, Illaalinta, dhaqanka iyo nabadda ee ay leedahay Hey’adda.
Ka qeyb-galayaasha ayaa waxaa soo doortay labada hey’adood iyagoo la shaqeynayo maamulada iskuulada. Macalimiintaasi la soo xulay waxa ay iskuuladooda ku baraan ardayda luuqadda Soomaaliga ama barashada cilmiga bulshada. Waxa ay sidoo kale wax ka yaqaanaan dhaqanka Soomaaliyeed gaar ahaana tixda, gabayada, sheekooyinka dhaqanka, sameeynta daramaha, cayaaraha hidaha iyo dhaqanka iyo dhaqanka bulshada guud ahaan.
Waxyaabaha diiradda lagu saaray ee ugu weynaa tababarka ayaa ahaa sidii loogu dhiiri-gelin lahaa carruurta iyo dhallinyarada inay u qeyxaan si hal abuurnimo ah gabayada, daramaha iyo artiska tooska ah. Saacado barasho iyo doodo ayaa lagu qaatay mowduucyo la xiriira nabadda, midnimada, dulqaadka, iyo aqbalaada isbedelka. Waxaa wax iska cad ahayd in ka qeyb-galayaasha ay ka war qabeen doorkooda aqoonyahano ahaan iyo inay yihiin dadkii lagu dayan lahaa maxaayeelay waxa ay ka hadleen qaababka ay u saacidi karaan nabadda iyo midnimada dadka Soomaaliyeed dhexdooda iyagoo umarayo naadiyada gabayada iyo sugaanta.
Labada maalin ee ugu dambeysay ee tababarka waxaa diiradda lagu saaray Illaalinta cannugga iyo teegerada nafsaaniga u ubaahan yahay. Macalimiinta waxaa la baray xirfadaha dhanka xiriirka, fekerka, saameynta iskuulada ay ku yeelan karaa, is-qiimeynta iyo sinnaanta waxbarashada ragga iyo dumarka.
Home 36 Macalimiin ah oo loo tababaray inay bilaawaan oo ay fududeeyaan naadiyada gabdhaha iyo wiilasha ee Iskuulada